आजका पत्रिकाको सम्पादकीय र विचारः सांसद सुविधा वृद्धिको विरोध | KTM Khabar
२०७३ मंसिर ७ गते ०८:४८ मा प्रकाशित
७ मंसिर, काठमाडौं । आज मंसिर ७ गते मंगलबार प्रकाशित पत्रपत्रिकाहरुले आफ्नो सम्पादकीयमा फास्ट ट्रयाक र सांसदको सुविधा लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
नागरिक दैनिकः हिन्दुधर्म र राजनीति
नागरिक दैनिकले स्वदेशी लगानीमै फास्ट ट्रयाकबारे सम्पादकीय लेखेको छ । राजधानीलाई तराई मधेशसँग जोड्ने फास्ट ट्रयाक आफैं निर्माण गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयको तयारीलाई सम्पादकीय मार्फत नागरिकले प्रशंसनीय मानेको छ ।
नागरिकको विचार पेजमा औषधि खर्चको औचित्य शीर्षकमा डा. सुभाष पोखरेलको लेख छापिएको छ । उनले देशको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्ने हो भने नेताहरुलाई स्वास्थ्य उपचारको नाममा पैसा दिने व्यवस्था तत्कालै बन्द गर्दै सरकारी अस्पतालमा उच्च नेताहरुको इलाज गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च राष्ट्रले बेहोर्ने गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै डा. साफल्य अमात्यको उपत्यकाभित्र पुरातात्विक अन्वेषण र भष्मिराज गौतमको कर्तव्य नभुलौं शीर्षकको विचारलाई प्रकाशन गरेको छ । नागरिकमै हिन्दु धर्म र राजनीति बारे डा. देवीप्रसाद सुवेदीले आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रतिनिधि भ्यालरी जुलियान्डको ‘शान्ति सम्झौता एक दशक’ शीर्षकको विचार नागरिकमा छापिएको छ ।
नयाँ पत्रिकाः सांसदहरुको तलब सुविधा
संसदले सांसदको तलब भत्तालगायत सुविधामा वृद्धि गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको विषयलाई लिएर समाजमा उत्पन्न प्रतिक्रिया र सांसदको जिम्मेवारीलाई अर्थपूर्ण रुपमा केलाउन जरुरी भएको भन्दै सांसदहरुको तलब सुविधा शीर्षकको समपादकीय लेखेको छ ।
विचार पेजमा विद्यार्थी नेता लेखनाथ न्यौपानेको ‘संगठन कहिलेसम्म भद्रगोल ?’ शीर्षकको लेख छापिएको छ । त्यस्तै सार्कको तीन दशक र अन्यौलपूर्ण भविष्य शीर्षकमा डा. निर्मल विश्वकर्माको टिप्पणीलाई पनि नयाँ पत्रिकाले स्थान दिएको छ ।
दक्षिण कोरियामा भ्रष्ट संस्कृतिको जरो शीर्षकमा जस्टिन फेन्डोसको विचारलाई स्थान दिइएको छ । नयाँ पत्रिकामा फ्रान्सका लागि पूर्वराजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठले ‘ट्रम्प विजयको बाछिटा र नेपाल’ शीर्षकमा लेख लेखेका छन् । साथै नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टको तीन प्रश्नः ‘राष्ट्रलाई अहित हुने संशोधन औचित्यहीन’लाई पनि नयाँपत्रिकाले स्थान दिएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकः राजेन्द्र महर्जनको ‘लोक कल्याणकारी राज्य’
आजको कान्तिपुर दैनिकले राजेन्द्र महर्जनको लेखलाई दृष्टिकोण पेजमा छापेको छ । ‘राज्य लोककल्याणकारी नहुनुको पीडा’ शीर्षकमा महर्जनले कुपोषण्बाट ग्रसित बालवालिकाको प्रशंगलाई उल्ल्ेख गरेका छन् ।
त्यसैगरी कान्तिपुरले ‘भाषा फेरि नबिग्रियोस्’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । त्यस्तै चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको कसरतबारे हिमाल न्यौपानेको लेख छापिएको छ । डा. कमल लामिछानको ‘ट्रम्प फोबिया’ शीर्षकको लेख कान्तिपुरमा छापिएको छ ।
डा. उमेशकुमार शर्माले चिकित्सा क्षेत्रका ‘सबल र दुर्बल पक्ष’ शीर्षकको लेख आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।
अन्नपूर्ण पोष्टः सांसदको सुविधा लुटतन्त्र
आजको अन्नपूर्णले संसदले तलब भत्ता बढाएको विषयमा ‘लुटतन्त्र’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटिजिक स्टडिजका केशवप्रसाद भट्टराईको ‘विश्व राजनीतिका महासंयोग हरु’ शीर्षकको विचार प्रकाशन भएको छ ।
त्यस्तै शान्ति सम्झौता भएको दश वर्षको सन्दर्भमा निराशाजनक दश वर्षबारे डा. विष्णुराज उप्रेतीको विचारले स्थान पाएको छ । त्यस्तै शीतलबाबु रेग्मीको हामी वीर कि बुद्ध ? शीर्षकको लेख छापिएको छ । साथै कमल कोइरालाको ‘इतिहासको पाठ’ शीर्षकको लेख पनि छापिएको छ ।